कोरोनाकालमा महिला साहित्यकार : कोही लेख्दै छन्, कोही पढ्दै छन्
आन्विका गिरिदेखि शिवानी सिंह थारू, मनीषा गाैचनदेखि उमा सुवेदी, अनि अर्चना थापादेखि कुमारी लामा, विमला तुम्खेवादेखि सरिता तिवारी, अनि सरस्वती प्रतीक्षाादेखि बिना थिंग । लेखिकाहरूकाे सशक्त उपिस्थिति छ नेपाली साहित्यकाे वर्तमानमा । माेमिला, हरिमाया भेटवालदेखि निभा शाह, अनि अनुवादमा जमिरहेकी सगुना शाह । नाम थुप्रैकाे लिन सकिन्छ । कतिकाे नाम यहाँ छुटिरहेकाे हुन सक्छ ।
तर एउटा खबर सुखद छ, कोरोनाकाललाई महिला सर्जकहरूले नयाँ–नयाँ कृति जन्माउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेका छन् । ११ चैतदेखि चार महिना लामो लकडाउन, त्यसपछि निषेधाज्ञाको समयलाई महिला स्रष्टाहरूले साहित्य सिर्जनामा समर्पित गरेका हुन् । घरमा बसेका बेला कतिपयले दर्जनौँ पुस्तक अध्ययन गरेका छन् भने धेरैले नयाँ कृतिको पाण्डुलिपि तयार गरेका छन् ।
कोरोनाकालमा कसले के गरे, गरिरहेका छन् त ? केही महिला साहित्यकारका अनुभव हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ:
कोरोनाले विश्व नै त्राहिमाम भएर काेही बाहिर निस्किन नसकेकाे बेला डुमेरु दिदी अर्थात् सरला गौतमले याे समयलाई लेखन तथा अध्ययनमा लगाएकी छन् । गत साउनमा उनले 'डुमेरु' उपन्यास ल्याएकी थिइन् । एक महिलाले नयाँ शहरमा गर्नुपरेको संघर्ष उपन्यासले बोल्छ । यो कृतिले बजारमा राम्रो चर्चा पाएको छ । प्रकाशनको डेढ महिना नबित्दै रिप्रिन्टको अवस्थामा पुगेको डुमेरु पुस्तकले उनलाई ‘डुमेरु दिदी’ मात्र बनाएन, साहित्यमा युवा प्रवेशको गाेरेटो पनि कोरिदिएको छ ।
बगैँचामा बढी समय बिताउने भएकाले कोरोनाकालले आफूलाई ‘गार्डेनवाली दिदी’ बनाएको उनी बताउँछिन् । ‘घरमा बस्दा बगैँचा स्याहारसुसार गर्ने, नयाँ साहित्यिक सिर्जना पढ्ने, भ्याएसम्म लेख्ने गरेकी छु’, उनले भनिन् ।
उनका अनुसार कोरोनाकालमा मानिसको जीवनशैली र व्यवहारमा परिवर्तन देखिएको छ । यसअघि परिवारलाई धेरै समय दिन नपाएकाहरू परिवारमाझ रमाएका छन् । छिमेकीसँग खासै कुरा नगर्नेहरू घरको छतमा बसेर गफिइरहेका हुन्छन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले पनि छिमेकीसँग सुखदुःख साट्ने मौका पाएकी छु ।’
कान्छी साहित्यकार भनेर चिनिने दुर्गा कार्कीले कोरोनाकालमै आफ्नो पहिलो पुस्तक ‘कुमारीका प्रश्नहरू’ पुस्तक प्रकाशित गरिन् । यसअघि पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेखैरै चर्चामा आएकी दुर्गाले घरभित्रको समयलाई मज्जाले सदुपयोग गरेको प्रमाण पनि हो यो पुस्तक । ‘पाँच वर्षदेखि पुस्तक प्रकाशन गर्ने योजना टर्दै आएको थियो’, उनले भनिन्, ‘लकडाउनपछि पाएको फुर्सदसँगै पुस्तक जन्मियो ।’
उनको पुस्तकले पनि राम्रो प्रशंसा पाएको छ । पाठक र अग्रजबाट उत्साहित प्रतिक्रिया पाएकाले अर्को कृतिका लागि मनोबल बढेको उनी बताउँछिन् ।
विन्दा पाण्डे फुर्सदको समयलाई लेख्ने र पढ्ने काममै सदुपयोग गरिरहेको बताउँछिन् । ‘लकडाउनमा थुप्रै पुस्तक पढियो, केही सिर्जनाहरू तयार गर्न पाइयो’, उनले भनिन्, ‘घरका नियमित काम सकेर पनि मज्जाले लेख्न र पढ्न पाउँदा आनन्द महसुस गरेँ ।’
लकडाउन सुरु हुनुअघि नै अर्थात् २५ फागुनमा उनले ‘समानताका पाइलाहरू’ पुस्तक बजारमा ल्याएकी थिइन् । त्यसयता फुर्सदको समयमा आफ्नो पुस्तकबारे आत्मसमीक्षा पनि गरेको उनले बताइन् ।
महिला सशक्तिकरणका सवालमा खरो लेख्ने उनी ‘क्रान्तिकारी साहित्यकार’को रूपमा चिनिन्छिन् । नेपाली राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको प्रकृति र प्रक्रियालाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने जमर्को आफूले गरेको पाण्डे बताउँछिन् ।
‘नेपाली श्रमिक महिला’, ‘आन्दोलनमा महिला सहभागिता’, ‘आजका युवा विद्यार्थी–भोलिका दक्ष जनशक्ति’ र ‘नेपाली राजनितिमा महिला’ उनका प्रकाशित कृति हुन् ।
वरिष्ठ साहित्यकार भुवन ढुंगानाले पनि लकडाउनकै माझमा पुस्तक ‘परित्यक्ता’ निकालिन् । उनको पुस्तकको चर्चा पनि बजारमा राम्रै छ । यसबाहेक लेख्ने र नयाँ पुस्तकहरू अध्ययन गरेरै फुर्सदको समय सदुपयोग गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।
नेपालय पब्लिकेसनले लकडाउनकै बीच चारवटा पुस्तक बजारमा ल्याएको छ । यही पब्लिकेसनबाट डा. सुधा शर्माको ‘सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सी’ र इल्याना भट्टराईको ‘नियात्रा’ पुस्तक प्रकाशित हुने क्रममा छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ४, २०७७, २१:२६:००